Esta 4 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
4 Mọdekaị+ wee nụ ihe niile e meworo;+ Mọdekaị wee dọwaa uwe ya, yiri ákwà iru uju,+ kpokwasị onwe ya ntụ+ wee gaa n’etiti obodo ahụ na-eti mkpu ákwá n’oké mwute.+ 2 N’ikpeazụ, ọ bịarutere n’ihu ọnụ ụzọ ámá eze,+ n’ihi na ọ dịghị onye na-eyi ákwà iru uju abịa n’ọnụ ụzọ ámá eze. 3 N’ógbè niile dị iche iche,+ n’ebe ọ bụla okwu eze na iwu ya ruru, e nwere oké iru uju+ n’etiti ndị Juu, nakwa ibu ọnụ+ na ịkwa ákwà na mkpu arịrị. A gbasakwara ákwà iru uju,+ kposakwa ntụ+ ka ọ bụụrụ ọtụtụ ndị ihe ndina. 4 Ụmụ agbọghọ Esta na ndị ọnaozi+ ya bịakwutere ya wee kọọrọ ya ihe na-emenụ. O wee wute nwunye eze nke ukwuu. O wee chịnye ndị mmadụ uwe ka ha chịgara Mọdekaị ka o were ya gbanwee ákwà iru uju ya. Ma ọ naraghị ya.+ 5 Esta wee kpọọ Hetak,+ bụ́ otu n’ime ndị ọnaozi eze, onye eze meworo ka ọ na-ejere ya ozi, o wee nye ya iwu banyere Mọdekaị ka ọ mata ihe nke a pụtara nakwa isi ihe a niile. 6 Hetak wee gakwuru Mọdekaị n’ámá obodo nke dị n’ihu ọnụ ụzọ ámá eze. 7 Mọdekaị wee kọọrọ ya ihe niile dakwasịworo ya+ nakwa kpọmkwem ego ole Heman kwuru ka a kwụnye n’ebe eze na-edebe akụ̀+ maka imegide ndị Juu, ka e bibie ha.+ 8 O nyekwara ya akwụkwọ+ iwu ahụ e tiri na Shushan+ ka a laa ha n’iyi ka o gosi ya Esta ma kọọrọ ya banyere ya, ka o nyekwa ya iwu+ ka ọ gakwuru eze rịọ ya ka o meere ha amara+ ma rịọ ya arịrịọ ihu na ihu maka ndị ya.+ 9 Hetak+ wee bata kọọrọ Esta ihe Mọdekaị kwuru. 10 Esta wee nye Hetak iwu banyere Mọdekaị,+ sị: 11 “Ndị niile na-ejere eze ozi na ndị niile nọ n’ógbè niile eze na-achị maara na nwoke ma ọ bụ nwaanyị ọ bụla a na-akpọghị akpọ nke gakwuuru eze n’ogige nke dị n’ime,+ iwu+ ya bụ ka e gbuo onye ahụ; a ga-egbu ya,+ ọ gwụla ma eze ò setịịrị ya mkpanaka ọlaedo ya. A kpọbeghị m ka m gakwuru eze kemgbe iri ụbọchị atọ ugbu a.” 12 Ha wee gwa Mọdekaị ihe Esta kwuru. 13 Mọdekaị wee zie ka a gwa Esta, sị: “Echela n’obi gị na ezinụlọ eze ga-alanahụ dịkwa ka ndị Juu niile ọzọ na-agaghị alanahụ.+ 14 N’ihi na ọ bụrụ na ị gbachi nkịtị ugbu a, enyemaka na nnapụta ga-esi n’ebe ọzọ bịara ndị Juu;+ ma gị na ezinụlọ nna gị ga-ala n’iyi. Ònye ma ma ọ̀ bụ n’ihi oge dị otú a ka i ji ruo n’ọkwá ịbụ nwunye eze?”+ 15 Esta wee zie ka a gwa Mọdekaị, sị: 16 “Gaa, kpọkọta ndị Juu niile nọ na Shushan,+ buokwanụ ọnụ+ n’ihi m, unu erikwala ihe oriri ma ọ bụ ṅụọ ihe ọṅụṅụ ruo ụbọchị atọ, ehihie na abalị.+ Mụ onwe m na ụmụ agbọghọ+ m ga-ebukwa ọnụ, e mesịa, m ga-agakwuru eze, bụ́ ihe iwu na-akwadoghị; ọ bụrụ na m ga-anwụ,+ ka m nwụọ.” 17 Mọdekaị wee gaa mee dị ka ihe niile Esta nyere ya n’iwu si dị.